Rita, Writing for My Sake!: မုန်း၍မဟူ - ဂျာနယ်ကျော် မမလေး
Posted by Rita at 12/04/2011 12:19:00 AM
မုန်း၍မဟူမှာ မျက်နှာဖုံးပန်းချီလေးကို ကြိုက်တယ်
မုမ်း၍မဟူဆိုတဲ့ အတွေးကို ကောင်းကောင်းထင်ဟပ်ပြနိုင်တယ်လို့ထင်တယ်
ဂျာနယ်ကျော် မမလေးစာအုပ်တွေထဲမှာ ပထမဆုံး ၀ယ်ပြီး ဖတ်ခဲ့တဲ့စာတစ်အုပ်ပဲ။ ဒီစာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သူနဲ့ကိုယ် သဘောထားကွဲလွဲခဲ့ဖူးတယ်။ တကယ်တော့ ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်က တူမနေတော့ အမြင်မတူတာလည်း သဘာဝကျပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲလိုကွဲလွဲချက်တွေရှိနေတာကြောင့်ပဲ ကိုယ်အိမ်ထောင်ပြုဖို့ တွန့်ဆုတ်တွေဝေခဲ့တာ ခုချိန်မှာ ပြန်တွေးကြည့်တော့ မှန်သလား၊ မှားသလား မပိုင်းခြားနိုင်သေးဘူး။
”ကျန်နေသေးတဲ့ သက်တမ်းတလျှောက်လုံး အတူတူနေတော့မယ်လို့တောင် ဆုံးဖြတ်ထားနိုင်စွမ်းပြီဆိုမှတော့ ဒီလူနှစ်ယောက်ဟာ အစစ အရာရာ တူမှ ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ တွေးစရာအကြောင်းမရှိပါဘူး။ မတူတာတွေနဲ့ သဟဇာတဖြစ်အောင် နေနိုင်စွမ်းသာ လိုတာပါပဲ။ မဟုတ်ရင် လူနှစ်ယောက်နဲ့ မပြီးနိုင်တဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံမျိုးမှာ ကိုယ့်အသိုင်းအဝိုင်းထဲ သူ ဝင်မဆံ့တာ၊ သူ့အသိုင်းအဝိုင်းထဲ ကိုယ် ဝင်မဆံ့တာဟာ ပြဿနာကြီးတစ်ခုပေါ့”
အဲလိုဝင်ဆံ့ဖို့နေရာမှာ နှစ်ဦးနှစ်ဘက်စလုံး အလျှော့မပေးနိုင်ခဲ့ရင် မိန်းမတွေဘက်က ပိုလိုက်လျောရတဲ့ ရာခိုင်နှုန်း ပိုများတယ်လို့ ဇွန်ထင်တယ်။
ကျနော်လည်း သူတို့နှစ်ယောက်အကြောင်းကိုဖတ်မိတော့ အသက်ရှုကြပ်သလိုခံစားရတယ်
သီလရှင်ဝတ်တဲ့ ဝေေ၀့မိခင်ကို အထင်သေးသတဲ့
အဲဒီလူကြီးပုံစံကြည့်ရတာ ဘာအဆီအနှစ်မှ စိမ့်လည်းမ၀င်လွယ် ဘာမှလည်းပြန်ထွက်မလာတဲ့ အရိုးတုံးကြီး/ကျောက်တုံးကြီးလိုပဲ
ကျနော်က ခံစားဖို့လောက်သာအဆင့်ရှိတဲ့ ရသစာပေမြတ်နိုးသူတယောက်ပါ
(( ဘာအဆီအနှစ်မှ စိမ့်လည်းမ၀င်လွယ် ဘာမှလည်းပြန်ထွက်မလာတဲ့ အရိုးတုံးကြီး/ကျောက်တုံးကြီးလိုပဲ ))
ဟုတ်ပါရဲ့။ ကောင်းလိုက်တဲ့ သရုပ်ဖော်။
ပြောရကြေးဆို ဂျာနယ်ကျော်မမလေးရဲ့ ဇာတ်ကောင်တွေကို အကြိုက်တွေ့လှတယ် မဟုတ်ဘူး။ စာရေးဆရာရဲ့ လက်ထဲမှာလို့ပဲ အမြဲထင်ခဲ့တယ်။
မုန်း၍မဟူ က ဇာတ်ကောင်တွေကတော့ သူ့တို့ဘာသာ သူတို့ သွားတယ်။ နောက် ဦးစောဟန် အကြောင်းဖတ်ရတာ မုန်းစရာလည်း မကောင်းဘူး။ နှစ်ယောက်စလုံး ချစ်ရက်နဲ့ ဆုတောင်းမှားလာကြသလိုပဲ။
ဦးစောဟန် ဝေဝေတို့အသိုက်အမြုံနဲ့ အစေးမကပ်နိုင်တာကို ရေးပြတာ ကိုယ့်စိတ်ထဲ ဇာတ်လမ်းဟာ တခြားစာအုပ်တွေလို စာရေးဆရာလက်ထဲက ထွက်လာတယ်လို့ မထင်မိတော့ဘူး။
ဂျာနယ်ကျော်မမလေးရေးသမျှမှာ (သူလိုလူကတော့ ပါစင်နယ်ကြောင့် ဆိုတော့ ဖယ်ထားကြည့် ) ကြိုက်လှချည့်ဆိုလို့ အတိုတစ်ပုဒ်ပဲ ရှိဘူးတယ် ... ၊ 'ခေမာရီ' ဆိုတဲ့ ဝတ္ထုတိုလေး ... အတော့်ကို ကျတော်ကြိုက်တယ် ။
ဂျာနယ်ကျော်မမလေ:ရဲ့ "သူမ"။ အရမ်းကြိုက်တယ်။
လှတမျက်နှာ & ယဉ်တကိုယ်လုံး၊ တွေးတစိမ့်၂ (ဒီနံမယ်လို့ထင်တာပဲ အတိုလေးတွေ) ထိမိတဲ့ အရေးအသားတွေကို တွေ့ရတယ်။ ဂျာနယ်ကျော်မမလေ: ကအဂလိတ်ဆေးကို မုန်းတယ်လို့ သူ့အကြောင်းရေ:တဲ့ စာမာ ဖတ်ရတယ်။ သေတဲ့အထိ မြန်မာဆေးပဲသောက်တယ်တဲ့။
မှာ မဖတ်ဘူးလို့..ဖတ်ကြည့်လိုက်တော့ မကြိုက်တဲ့လူ တွေတယ်များတာကိုး..၀င်းကတော့ ဂျာနယ်ကျော်ဦးချစ်မောင်ရော..ဂျာနယ်ကျော်မမလေးရော..သားဂျာနယ်ကျော်ရဲ့စာတွေကို ကြိုက်တယ်..
ဦးချစ်မောင်ကတော့ ထားပါတော့..ဒေါ်မမလေးရဲ့ စာအုပ်တွေကတော့ လက်ကကို မချနိုင်ဘူး.
.ဥပမာပြရရင်..လောကီရတနာ..ပထမဆုံးအကြိမ်ဖတ်တုန်းကဆို..ကြက်သီးတောင် ထတယ်..နောက် အဖြူ..နောက်.သွေး..စာအုပ် ဖတ်တာ သိပ်မကြာသေးဘူး ၂နှစ်လောက် ရှိဦးမယ်..မျက်ရည်ကျခဲ့မိတဲ့အထိပဲ..သူထဲက ကွိဆိုရင် ဖတ်ချင်လွန်းလို့..စာဖတ်တဲ့သူတိုင်းကို
မေးယူခဲ့တဲ့အထိပဲ..ခရေဖြူပြောတဲ့..ဂျာနယ်ကျော်မမလေးက အင်္ဂလိပ်ဆေးကို မသောက်တာ.
မြန်မာတိုင်းရင်းဆေးပညာကို ဂျာနယ်ကျော်ဦးချစ်မောင် ဆုံးပါးသွားကတည်းက လိုက်စားခဲ့ပြီး..သူတတ်ကျွမ်းခဲ့တဲ့ ဆေးပညာနဲ့ အသက်ပေါင်းများစွာ ကယ်တင်ကု
သပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာ့ဆေးပညာရယ်လို့ စာအုပ်တစ်အုပ် ရေးနိုင်ခဲ့တဲ့အထိပါပဲ..ပြောရင်းဆိုရင်းရှာလိုက်တာ..http://mashwemi.wordpress.com/category/ဂျာနယ်ကျော်မမလေး/မှာ ဂျာနယ်ကျော်မမလေးရဲ့ စာတွေကို ကြ်ုက်နှစ်သက်သူ ဘလော့ဂ်ဂါတွေရဲ့ ခံစားမှုတွေကို ဖတ်ရှုနိုင်ပြီဖြစ်ပါကြောင်း..
ကိုယ်သိသလောက်တော့ ဂျာနယ်ကျော်မမလေးကို ကြိုက်တဲ့သူတွေသာ ပိုများတာပါ၊ မဟုတ်လား။ မကြိုက်ဘူးပြောတဲ့သူ မတွေ့ဖူးသလောက်ပဲ။
ပြီးတော့ ထင်မြင်တာ ပြောရရင် ဗမာစာဖတ်သူတွေက တခုခု လိုချင်တဲ့စိတ်နဲ့ ဖတ်ကြတာ များတယ်ထင်မိတယ်။ တခုခုရတဲ့ တခုခု ပေးနိုင်တယ်လို့ သူတို့ထင်တဲ့ စာမျိုး၊ စာရေးသူမျိုးတွေကို ပိုကြိုက်ကြသလားပဲ။
ကိုယ်တော့ စာဖတ်ရင် ခံစားမှုနဲ့ပဲ ဖတ်တယ်။ စာရေးသူရဲ့ အနုပညာခံစားမှုနောက်၊ ဇာတ်ကောင်တွေရဲ့ အတွေ့အကြုံခံစားမှုနောက်ကို လိုက်ပြီး ဖတ်ချင်တယ်။ အဖြစ်အပျက်တွေကို စာရေးသူက ဖန်တီးလုပ်ယူထားတယ်လို့ ထင်ရင်၊ ဇာတ်ကောင်စရိုက်ကို စာရေးဆရာက သူ့လက်ထဲမှာပဲ ထားတယ်လို့ ထင်ရင် သိပ်ခံစားလို့ မရတော့ဘူး။
ကိုယ်စာဖတ်တဲ့အခါ စာတွေဆီက လိုချင်တာ တခုခုရှိတယ်ဆိုရင် တင်ပြပုံ၊ ခံစားမှုနဲ့ ဇာတ်ကောင်စရိုက်ပဲ။ နမူနာတွေ အတုယူစရာဥပမာတွေ ပညာပေးတွေ စိတ်ဓါတ်ခွန်အားတွေ မဟုတ်ဘူး။ အလိုလို ယူဖြစ်ရင်ဖြစ်သွားမယ်။ တမင် ထည့်ပေးနေရင်တော့ မကြိုက်ဘူး။ =)
အဖြစ်မှန်ကိုပြန်ရေးတာ၊ အပြင်မှာရှိတဲ့သူကို ပြန်ရေးပြတာ ဖြစ်ပါစေဦးတော့ ဇာတ်ကောင်စရိုက်ကို ခံစားလို့မရရင် မကြိုက်တော့ပြန်ဘူး။
ဂျာနယ်ကျော်မမလေးနဲ့ ပတ်သတ်လို့ ပြောရမယ်ဆိုရင် ကျွန်မအတွက် နှစ်ပိုင်းခွဲပြောမှ ဖြစ်လိမ့်မယ်။ သူ့စာတွေနဲ့ သူ။ သူ့စာတွေကို မစွဲလမ်းလှဘူး။ သူ့ဘဝကိုတော့ သူ့စာတွေထက် ပို စိတ်ဝင်စားမိတယ်။
သူ့စာတွေထက် သူက ပို စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသေးတယ်။
သူငယ်ချင်းတွေကမယုံပါဘူး ခုလဲကျွန်မဆီမှာ သူစာအုပ်တွေ
အားလုံးနီပါးရှိပါတယ် သူ့လိုပဲ ဂျူး-ဆရာဘုန်းနိုင်-
အပေါ်က မမရေးထားတဲ့ကွန်မက်လေးက စာတွေထက်ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်